DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA ACER LAPTỌỌPỤ TOUCHPAD - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ụzọ ịchọta na wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Acer laptọọpụ
Nsogbu nke mgbasa ozi iwe iwe bụ nnukwu n'etiti ndị ọrụ nke smartphones na mbadamba na-agba ọsọ gam akporo. Otu n'ime ihe kachasị iwe bụ banners mgbasa ozi Wepụ, nke gosipụtara n'elu windo niile mgbe ị na-eji ngwaọrụ. Ọ dị mma, iwepụ ihe otiti a dị nnọọ mfe, taa, anyị ga-ewebata gị usoro nke usoro a.
Iji malite, ka anyị kọọ mkpirikpi banyere mmalite nke mgbasa ozi a. Nwepu bụ mgbasa ozi gbasaa nke netwọk AirPush sitere na netwọk, na, na teknụzụ, bụ mgbasa ozi mgbasa ozi. Ọ na-apụta mgbe ị wụnye ụfọdụ ngwa (wijetị, akwụkwọ ntanetị ndị dị ndụ, egwuregwu ụfọdụ, wdg), mgbe ụfọdụ, ọ na-adanye n'ime shea (launcher), nke na-eme ndị na-emepụta Chinese nke abụọ smartphones.
E nwere ọtụtụ nhọrọ maka iwepu banners mgbasa ozi nke ụdị - site na dị mfe, ma na-adịghị arụ ọrụ, dị mgbagwoju anya, ma na-ekwenye na ọ bụ ihe dị mma.
Usoro 1: Ebe nrụọrụ weebụ AirPush
Dika usoro nke iwu a nakweere na oge a, ndi oru gha aghaghi ime nhọrọ nke imebi mgbasa ozi ndi mmadu. Ndị okike nke Nwepụ, ọrụ AirPush, gbakwunyere nhọrọ dị otú a, ọ bụ ezie na ọ bụghị ebe niile ekwusara maka ihe doro anya. Anyị ga-eji ohere iji gbanyụọ mgbasa ozi site na saịtị ahụ dị ka ụzọ mbụ. A obere ederede - a ga-eme usoro ahụ site na ngwaọrụ mkpanaka, mana maka mma ọ ka mma iji kọmputa.
Meghee ihe nchọgharị gi ma gaa na akwukwo ndi mmadu.
N'ebe a, ị ga-abanye IMEI (njirimara ngwaọrụ ngwaọrụ) na koodu nche megide bọtịnụ. Enwere ike ịhụ ekwentị IMAY site n'akwụkwọ ntuziaka dị n'okpuru ebe a.
Gụkwuo: Otu esi amụta IMEI na gam akporo
Lelee na ozi ahụ abanye ziri ezi wee pịa bọtịnụ ahụ. "Nyefee".
Ugbu a, ịhapụla akwụkwọ mgbasa ozi, ma ọkọlọtọ ga-apụ n'anya. Otú ọ dị, dị ka omume na-egosi, usoro ahụ anaghị arụ ọrụ maka ndị ọrụ niile, ọbụnakwa na-abanye na njirimara nwere ike ime ka mmadụ nọrọ na nche, ya mere gaa n'ihu usoro ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Usoro 2: Ngwa Antivirus
Ihe ka ọtụtụ usoro antivirus nke oge a maka gam akporo os nwere mpaghara nke na-enye gị ohere ịchọpụta ma hichapụ isi mmalite nke ozi mgbasa ozi Gaa. Enwere ọtụtụ ihe nche - eluigwe na ala, nke ga-adịrị ndị ọrụ niile, mba. Anyị enyochala ọtụtụ antiviruses maka "robot green" - ị nwere ike ịgụ ndepụta ma họrọ ngwọta nke ga-adọrọ gị mma.
Gụkwuo: Free Antivirus maka gam akporo
Usoro 3: Ụlọ ọrụ Tọgharia
Ihe ngwọta dị egwu na ihe isi ike na mgbasa ozi Ọpụpụ bụ ọrụ nrụpụta ụlọ ọrụ. Ntọala zuru ezu na-ekpuchi ekwentị nchekwa ma ọ bụ mbadamba, wee wepụ isi iyi nke nsogbu ahụ.
Biko mara na nke a ga-ewepu faịlụ njirimara, dịka foto, vidiyo, egwu na ngwa, ya mere anyị na-akwado iji nke a nanị dị ka ihe ikpeazụ, mgbe ndị ọzọ niile adịghị arụ ọrụ.
Gụkwuo: Tọgharia ntọala na gam akporo
Anyị atụlewo nhọrọ maka iwepu mgbasa ozi site na ụdị ekwentị. Dịka ị pụrụ ịhụ, iwepu ya adịghị mfe, mana ka ọ ga-ekwe omume. N'ikpeazụ, anyị chọrọ ichetara gị na ọ ka mma ibudata ngwa sitere na isi mmalite ndị a tụkwasịrị obi dị ka Google Play Market - na nke a, ọ gaghị enwe nsogbu na ọdịdị mgbasa ozi achọghị.